Iindaba -Yintoni igwebu leCopper kunye nokusetyenziswa kwayo?
Igwebu lobhedu sisixhobo esitsha esisebenza ngemisebenzi emininzi nenani elikhulu lemingxunya edityanisiweyo okanye engaxhunywanga esasazwe ngokulinganayo kwimatrix. Igwebu lobhedu liqhuba kakuhle kwaye malleability. Inexabiso eliphantsi kunye nokuqhuba okungcono kune-nickel foam kwaye inokusetyenziselwa ukulungisa izinto zebhetri anode (carrier), izinto zokuthwala izinto zokuthintela kunye nezinto zokhuselo zombane.
I-foam yobhedu ineepropathi ezilungileyo zoomatshini kunye nokusebenza kwayo, ukuqhuba kombane kunye nokuqhutywa kwe-thermal kunye nesakhiwo esinenani elikhulu le-pores, kodwa ukumelana ne-alkali, amandla okuqina kunye nokuthamba kobhedu bentsimbi kusekho, kudityaniswa nokukhusela kwayo i-electromagnetic elungileyo kunye nomsebenzi wokufakwa kwengxolo , amagwebu obhedu anoluhlu olubanzi lwezicelo.
1. Izinto zombane
Ngenxa yokuqhuba kwayo ngokugqwesileyo, inokusetyenziselwa izinto ezinesakhelo se-electrode kwiibhetri ezintsha. Njengokukhetha okugqwesileyo komqokeleli we-electrode we-capacitor-layer capacitor, ikwindawo yentengiso enkulu efihliweyo yezicelo zegwebu lobhedu.
Njengezixhobo ze-electrode zokubuyiselwa kombane kumanzi amdaka anebhedu, igwebu lobhedu likwabonisa ukusebenza ngokugqwesileyo kwaye linethemba elibanzi lophuhliso kule ntsimi.
Kwi-organic chemical reaction, ukusebenzisa indawo enkulu engaphezulu kulwakhiwo lwezixhobo zegwebu zobhedu ukubuyisela endaweni yokubetha ngesinyithi ipleyiti yobhedu, olu phando lufumene imizamo emininzi kunye nemizekelo eyimpumelelo, kwaye inokubakho kwesicelo.
Ukusebenzisa i-foam yobhedu njenge-photocatalytic air purification carrier esinye isicelo esiyimpumelelo.
3. Izinto zokuhambisa ezifudumeleyo
Igwebu lobhedu lisetyenziswa njengesixhobo esidala ilangatye kwizixhobo eziphambili zokulwa nomlilo kumazwe amaninzi aphesheya, ngakumbi njengezixhobo zokwahlula amadangatye. Igwebu lobhedu libonisa ukusebenza ngokugqwesileyo ngenxa yokuqhuba kakuhle kwe-thermal, okwenza ukuba ibe yinto efanelekileyo yokubuyisela ilangatye.
Ukongeza, inokusetyenziswa njengesixhobo sokususa ubushushu kwiimoto kunye nezixhobo zombane,
4. Ukunciphisa ingxolo kunye nezinto ezikhuselayo
Ukusasazeka kwamaza esandi kuya kusasaza ukubonakala komphezulu wobume begwebu lobhedu, kwaye amandla esandi aya kuncipha kakhulu ziziphumo zokwandiswa kokuthula kunye nokuthula kwe-micropore.
Iimolekyuli zobhedu lobhedu ziyafana nobhedu ebuntsimbi, ke ukusebenza kwayo kokukhusela ayitshintshi. Njengoko ipropathi ekhuselayo yobhedu ebuntsimbi ikufutshane naleyo yesilivere ebuntsimbi, ikwangumbane ogqwesileyo wokukhusela umbane.
5. Izinto zokucoca ulwelo
Ubhedu lobhedu ngokusisiseko alunabungozi emzimbeni womntu, kwaye igwebu lobhedu lineempawu ezibalaseleyo zokwakheka, ke igwebu lobhedu njengesixhobo sokucoca kwezonyango siphumelele kakhulu ekusebenzeni.
Ngokufanayo, njengesixhobo sokucoca amanzi, igwebu lobhedu likwabonisa ukusebenza ngokugqwesileyo kwizixhobo zokucoca amanzi.
6.Impahla yezixhobo zoxinzelelo
Ngenxa yobume besakhiwo sayo, amagwebu obhedu adlala indima enkulu ekusasazeni nasekubetheni ulwelo. Oku kuyenza njengecandelo lokudodobala elisetyenziswe kwizixhobo ezahlukeneyo zokunciphisa uxinzelelo lolwelo kunye nenqanaba.
Ukuqina, ukumelana nokumelana nobhedu ebuntsimbi nako kube zizibonelelo zegwebu lobhedu ekusetyenzisweni kwezixhobo.
Beihai edityanisiweyo Materials Co., Ltd. Ngaba umenzi ngobuchule iimveliso amagwebu yesinyithi eChina edityaniswe R & D, imveliso kunye neentengiso.
Isiphumo sonyaka sogwebu lobhedu sisigidi esi-1.8 semitha.
Wamkelekile toe-mail ngolwazi oluthe kratya info@metalfoamweb.com.
Iisampuli zasimahla ziyafumaneka ngesicelo.
Ixesha Post: Jun-16-2021